अनियमित महिनावारीमा गर्भाधारण कति सहज? – Health Post Nepal
अनियमित महिनावारीमा गर्भाधारण कति सहज?
२०७८ फागुन ११ गते १३:४५
काठमाडौं – धेरै महिलाहरूले अनियमित महिनावारीको समस्या सामना गरिरहेका हुन्छन्। जसका कारण उनीहरुलाई गर्भ रहन समस्या हुने गरेको छ। तर, अनियमित महिनावारी हुँदैमा गर्भवती हुँदैन कि भनेर चिन्ता लिनु पर्दैन। नियमित महिनावारी हुने महिलाको तुलनामा गर्भवती हुन भने अलि गाह्रो हुनसक्छ। एक महिलाको महिनावारी चक्र २१ दिन भन्दा कम वा ३५ भन्दा बढी भएको अवस्थामा अनियमित मानिन्छ। यदि अनियमित महिनावारीको समस्या छ भने कसरी सजिलै गर्भवती हुने त? आउनुस् चर्चा गरौं।
ओभ्युलेसनको सही समय जान्नुस
कुनै पनि महिला गर्भवती हुनको लागि ओभ्युलेसनको समयमा यौन सम्पर्क गर्न आवश्यक छ। त्यसैले यो पत्ता लगाउन धेरै महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईं कहिले ओभ्युलेट गर्दै हुनुहुन्छ। अनियमित महिनावारी भए पनि तपाईंले ओभ्युलेट गर्ने सही समय पत्ता लगाउन सक्नु भयो भने गर्भधारण गर्न सजिलो हुन्छ। ओभ्युलेसन पत्ता लगाउन केही उपायहरूको सहारा लिन सक्नुहुन्छ। जस्तै-
-शरीरको तापमानमा परिवर्तन आउनु
-पाठेघरको नरम भएर खुल्नु
-पाठेघरको म्युकस अण्डाको सेतो जस्तै चिल्लो, पातलो र स्पष्ट हुन्छ
-पेटको तल्लो भागमा दुखाइ र पीडाको अनुभूति हुन्छ
-यौन चाहना बढ्छ
यी प्रकारका लक्षणबाट तपाईं ओभ्युलेसन भइरहेको बुझ्न सक्नुहुन्छ तर, ओभ्युलेसनकै कारण माथिका लक्षण देखिन्छन् भन्ने पनि होइन।
ओभ्युलेसन प्रेडिक्टर किटको प्रयोग
तपाईं ओभ्युलेसन पत्ता लगाउन ओभ्युलेसन प्रेडिक्टर किट पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यस किटको मद्दतले तपाईंलाई ल्युटेनाइजिङ हार्मोनको वृद्धि पत्ता लगाउन धेरै मद्दत मिल्नेछ। यो हर्मोनले ओभ्युलेसन सुरु गराउँछ। साथै यो प्रयोग गर्न धेरै सजिलो पनि छ।
ट्रान्स-भेजाइनल अल्ट्रा साउन्ड
तपाईं सही ओभ्युलेसन पत्ता लगाउन ट्रान्स-भेजाइनल अल्ट्रासाउन्ड पनि गराउन सक्नुहुन्छ। साथै, डाक्टरको सल्लाहमा ब्लडवर्क मार्फत पनि ओभ्युलेसन पत्ता लगाउन सकिन्छ।
यदि तपाईं ओभ्युलेसन चक्रलाई राम्ररी ट्र्याक गर्न सक्षम हुनुहुन्न भने तपाईंले नियमितरुपमा यौन सम्पर्क राख्नुपर्ने हुन्छ। यसले पनि गर्भाधारण सहज बनाउन मद्दत गर्छ। यसका लागि तपाईंले हरेक २ देखि ३ दिनमा यौन सम्पर्क बनाइराख्नु पर्ने हुन्छ। एक स्वस्थ पुरुषको शुक्रकीट महिलाको पाठेघरमा ५ दिनसम्म सक्रिय रहन सक्छ। यस्तोमा हरेक २–३ दिनमा यौन सम्पर्क गरेमा फाइदा हुन्छ।
डाक्टरको परामर्श लिनुस्
यदि अनियमित महिनावारी हुनुको कारण कुनै रोग (थाइराइड, पिसिओएस, उच्च रक्तचाप) हो भने उपचार गराउनुस्। आफ्नै समस्या डाक्टरलाई भन्नुस्। डाक्टरले ओभ्युलेसनलाई प्रेरित गराउन क्लोमिफेन साइट्रेट दिनसक्छन्। यो ओभ्युलेसनलाई उत्तेजित गर्न एक धेरै प्रभावकारी औषधि हो। यसले धेरै राम्रो नतिजा दिएको छ।
के अनियमित महिनावारीले गर्भाधारणलाई प्रभावित गर्छ त?
अनियमित महिनावारीका कारण गर्भाधारण प्रभावित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा तपाईंको महिनावारी चक्र कुन कारणले अनियमित भइरहेको छ भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ। यदि अनियमित महिनावारी हुने कुनै खास कारण छैन भने गर्भाधारण गर्न तपाईंलाई कुनै समस्या हुनेछैन। तर पनि कुनै पनि प्रकारको खतराबाट बच्न डाक्टरसँग सल्लाह गर्नुहोस्। साथै कुनै रोगका कारण महिनावारी अनियमित छ भने यसले भने गर्भाधारणमा केही समस्या ल्याउन सक्छ। जस्तो कि-
पिसिओएसबाट पीडित महिला
-पिसिओएसबाट पीडित महिलाहरूलाई गर्भाधारण गर्नमा केही समस्या हुन सक्छ। त्यसैले तिनीहरूले नियमित चेकअप गराइराख्नुपर्छ।
-पिसिओएसबाट पीडित महिलामा गर्भपात हुने सम्भावना पनि रहन्छ
-प्रि-क्लेम्पसिया, गर्भावस्थाको २० औं हप्तापछि रक्तचापमा अचानक वृद्धि।
-समयपूर्व जन्म (समयपूर्व जन्म) हुनसक्ने सम्भावना
हाइपर थाइरोडिज्म भएका महिला
हाइपर थाइरोडिज्मबाट पीडित महिलाहरूमा पनि गर्भाधारण गर्न समस्या हुनसक्छ। उनीहरुको हर्मोन अनियमित भएको कारण गर्भावस्थामै बच्चा मर्ने, समयपूर्व सुत्केरी हुने र जन्म दोष जस्ता समस्या हुन सक्छ।
यदि तपाईंको महिनावारीको अन्तरालमा ठूलो भिन्नता छ भने तुरुन्तै डाक्टरलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। जसले गर्दा तपाईलाई महिनावारी अनियमित हुनुको कारण पत्ता लगाउन सहज होस्। यदि तपाईंलाई केही गम्भीर समस्याको कारण अनियमित महिनावारी भइरहेको छ भने डाक्टरबाट आफ्नो जाँच गराउनुहोस्। साथै कुनै समस्याका बीच गर्भाधारण गर्नुभएको छ भने नियमित रुपमा डाक्टरसँग चेकजाँच गराइराख्नस्। जसले तपाईं र तपाईंको बच्चा सुरक्षित रहनेछ।